भरतियहरु बिहारबाट मदिरा पिउन नेपाल आउँछन्, तिर्खा मेटाउँछन् र घर फर्किन्छन् ... - PUBLICAAWAJ
भरतियहरु बिहारबाट मदिरा पिउन नेपाल आउँछन्, तिर्खा मेटाउँछन् र घर फर्किन्छन् …
प्रकाशित : बिहिबार, माघ ०३, २०७५२१:०३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
बीबीसी | जाडोको दिन सूर्यास्त हुनुभन्दा केहीअघि वीरगन्ज-रक्सौल सीमा हुँदै केही भारतीय मोटरसाइकल र कारहरू वीरगन्जतिर हान्निए। उनीहरू वीरगन्जमा छरिएर रहेका रेस्टुराँ र बारमा पुगेर रोकिए।
भारतको बिहारमा मदिरा लुकाइएको स्थानमा खोजतलास गर्दै प्रहरीहरू
पर्सा जानकीटोलाका अहमद आलम भन्छन्, “दैनिक चारपाँच सय त कहिले एक हजारसम्म भारतीय मोटरसाइकलहरू यता आउँछन्। बजार भारतीयहरूले भरिएको हुन्छ। उनीहरू सेकुवा र रक्सी खान्छन्। कहिले त पिटापिट र झैझगडा पनि हुन्छ। हामीलाई हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।”
“रक्सी खान आउने भारतीयहरूले बाटो बजार सबै ‘जाम’ गरिदिने गरेका छन्। हामी महिलाहरूलाई बाटो हिँड्न पनि अप्ठ्यारो छ। बाटो छेकेर बसिदिन्छन्, बाटो पनि छोड्दैनन्, नचाहिने कुरा गरिराख्छन्।”
प्रदेश सरकारले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि उनले “दारुको पसल कम हुनु पर्नेमा झन् बढिरहेको” बताइन्।
मध्यतराईको सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन ‘रक्सी पर्यटन’ पूर्वी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि जताततै पाइन्छ।
नाकामा भेटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगन्जका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक टेकेन्द्र पौडेलले भने, “बिहारमा मदिरा किन्न पाइन्न। त्यहाँका मानिसहरूले मदिरा पिउने ठाउँ यहीँ हो। अचेल सीमामै मदिरा पाइने भएकाले धेरै टाढा उनीहरू जाँदैनन्।”
नेपाल-भारत सीमनजिकै मदिरा पसल सञ्चालन गर्ने इन्द्र गनगाईँले भने, “उनीहरुले सस्तो प्रकारको मदिरा खान्छन्। एक पटक पचासदेखि एक सय रुपैयाँ खर्च गर्छन्। मदिरासँग केही खाजा पनि खान्छन्।”
गौरीगन्ज जनता चोककी ललिता गनगाईँले भनिन्, “यो पेसा पनि गर्न पाइएन भने के गरेर खानु? बालबच्चा छन्। हाम्रो खेतीपाती पनि धेरै छैन। हामी यही उपायले खाइरहेका छौँ।”
मदिराले बढाएको ‘विकृति’ कसरी रोकिएला?
“सीमाक्षेत्रमा भइरहेको मदिरा बिक्रीलाई समेत ध्यानमा राखी हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ। हामीले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। गैरकानुनी मदिरा पसललाई हटाउने योजना छ।”
उनले भनिन्, “सीमाक्षेत्रमा अरू थोकभन्दा मदिरा नै बढी बिक्री हुने गर्छ।
अर्का स्थानीयवासी हरि अधिकारी भन्छन्, “यहाँको बजारमा त मिठाई, किराना र कपडा पसलमा समेत मदिराको बिक्री वितरण हुन्छ।”
नगरवासीहरू मदिराको खुल्लमखुल्ला बिक्रीले निम्त्याएका ‘विकृति’ नियन्त्रण नभएकोमा खिन्न छन्।
न्यायिक समितिमा घरायसि उजुरी बढ्दै